मौरिन्हो : ब्यबहारले गर्दा पोग्बा फेरी कहिले क्याप्टेन हुन सक्दैनन्!! पोग्बा खेल अघि नै क्याप्टेन पदबाट आउट - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
मौरिन्हो : ब्यबहारले गर्दा पोग्बा फेरी कहिले क्याप्टेन हुन सक्दैनन्!! पोग्बा खेल अघि नै क्याप्टेन पदबाट आउट
प्रिमिएर लिग-लन्डनम्यानचेस्टर युनाइटेडका कार्यकारी म्यानेजरका रुपमा स्थापित चर्चित कोच जोसे मौरिन्हो भन्छन पौल पोग्बाको हेराइ, विचार र ब्यबहारले उनि कहिले पनि युनाइटेडका निम्ति क्याप्टेन रहने छैनन्। उनको कप्तानी नरहनुको कारण एउटा मिडफिल्डरमा हुनु पर्ने ब्यबहार न रहनाले गर्दा हो !
नेपाली समय अनुसार बुधबार युनाइटेड विरुद्ध डेर्बी खेल हुनु अगाडी नै मौरिन्होले यो इरादा बनाएका हुन्। कराबौ कप हुनु अघि नै पौल पोग्बाको कप्तानी नकाब निकालिएको हो।
उनको खेल अनि ओल्ड ट्राफोर्डमा युनाइटेडको घरेलु हारमा पोग्बाको गल्ति र प्रिमिएरका आलोचनाले गर्दा उनको टिमको नेतृत्व गुमेको हो। घरेलु मैदानमा वोल्फ्स विरुद्धको खेलले मौरिन्होलाई निकै स्तत्ब्द तुल्याएको थियो। ट्वीटरमा पोग्बाले पोस्ट गरेका शब्दले मौरिह्नोलाई झन् लज्जास्पद तुल्यायो।
वोल्फ्स विरुद्धको खेलमा पोग्बाको खेल निकै अनौपचारिक देखियो उनि मार्फत खोसिएको बलमा उनले कुनै पनि संगर्ष देखाएनन र खेलमा निकै गल्ति गरिरहे र उनि भन्छन हाम्रो खेलमा ‘अट्याक,अट्याक’ हुनु पर्यो, फलत यी सबै कार्य र शैलीले पौल प्रतिको आत्मियता गुम्न पुग्यो र मौरिन्होले पोग्बालाई कप्तानी जिम्मेवारीबाट हटाइदिए।
मौरिन्हो भन्छन-“खेलाडीले गल्ति गरे र गरिरहे एक हप्ता र अर्को हप्ता साथै अर्को हप्ता जसले मलाई पाठ सिकायो कि केटाहरुले सिक्न मानेका छैनन”!
साथै उनि भन्छन-“खेलाडीहरुले आफ्नो निम्ति आफ्नो खालको खेल खेलीरहेका छन् जुन सैय छैन अरुले १०१ प्रतिसत खेल खेली रहदा हाम्रो टोली ९५ प्रतिसत खेल खेल्दै छ। म सहन सक्दिन।”!
पोग्बाले ट्वीटरमा लेखेका थिए – “खेल हाम्रो घरमा हुदै छ र हामीले अट्याक गर्नु पर्छ”! २०१६ मा अत्यधिक लगानी ८९ मिलियन पौण्डमा युबेन्ट्सबाट ओल्ड ट्रांफोर्ड छिरेका पोग्बा कोचबाट निकै आलोचित भैसकेका थिए।
हुनत युबेन्ट्सबाट ठुलो लागतमा प्रिमिएर लिग प्रवेश गरेका पोग्बालाई बार्सिलोनाबाट निकै हेरिराखिएको थियो, सायद कारण उनको खेलमा निकै बदलाव छ।
के होला काराव कप युनाइटेडका निम्ति !! के मौरिन्होको कप्तान फेरिएला या पोग्बा कप्तानीबाट हटलान !!